ကျွန်တော်ရဲ့ မွေးနေ့လေး အတွက် အမှတ်တရ လက်ဆောင်များ နှင့် အမှတ်တရ ကျေးဇူးတင်လွှာFree Online Media Malaysia (ALL IN ONE)
» ကျွန်တော်ရဲ့ မွေးနေ့လေး အတွက် အမှတ်တရ လက်ဆောင်များ နှင့် အမှတ်တရ ကျေးဇူးတင်လွှာ
ကျွန်တော်ရဲ့ မွေးနေ့လေး အတွက် အမှတ်တရ လက်ဆောင်များ နှင့် အမှတ်တရ ကျေးဇူးတင်လွှာ
Written By နေဇော် လင်း on Thursday, December 8, 2011 | 6:00:00 PM
ကျွန်တော်ရဲ့ မွေးနေ့လေး အတွက် ဆုတောင်းပေးကြသော အမှတ်တရ စာလေးတွေကို ကျွန်တော် နှစ်သက်မိတယ်။ ကျွန်တော့်အတွက် ပစ္စည်းလက်ဆောင် မဟုတ်တဲ့ အခုလို အမှတ်တရ သူငယ်ချင်းများ မိတ်ဆွေများ ထံမှ အမှတ်တရ လက်ဆောင် လုပ်ပေးထားတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေ နဲ့ စာလွှာလေးတွေ ရေးသားပေးကြလို့ ကျွန်တော် အရမ်းပဲ ပျော်ရွှင်ကြည်နူး ပီတိ ဖြစ်မိပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်းက ကျွန်တော်အတွက် အားဆေး လေးခွက်ပါပဲဗျာ။
အခု ဒီနှစ်အတွက် ကျွန်တော်ရဲ့ မွေးနေ့လေးမှာ အမှတ်တရ ဆုတောင်းပေးကြသော သူငယ်ချင်းများ မိတ်ဆွေများ အားလုံးရဲ့ ပြောဆိုထားကြတဲ့ စာလွှာလေးတွေကို စုစည်းပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီလက်ဆောင်လေးကို ကျွန်တော် အသက်ရှင်နေသရွှေ့ အမှတ်တရ သိမ်းဆည်းထားမှာပါ။ အခုလို အမှတ်တရ စာလွှာလေးတွေ ရေးပေးကြလို့ အထူး ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။
၁။ Su Htat Htat Aung
၂။ Nay Yaung
happy birthday bro...:)
၃။ Marena Al-fix
၄။ Myat Nway
၅။ Kye Sin Cho
Happy Birthday Fri..............
၆။ Oak Gyi
Happy Birthday ...Nyi Lay :)
၇။ May Thazin Soe
happy birthday par fri
၈။ Nyein Chan
happy birthday ကိုနေဇော်လင်း
၉။ Mc Jman
၁၀။ David Smith
၁၁။ Shwin Myue
၁၂။ Susu Rosenyein
၁၃။ Hlamin Htike
ကောင်းသော မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ
လို့ အကို ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်
၁၄။ Sandar Swam
၁၅။ Win Ei May
၁၆။ Sai Rain
၁၇။ Zawzaw Zaw
happy birthday nyi,,,,
၁၈။ Ko Zaw
Happy Birthday ပါ ညီလေးရေ . . .
အစ်ကို မအားလို့ မလာနိုင်တော့ဘူးကွာ။
၁၉။ Yeko Win
ပာက် ပီး ဘက် ဒေး ပါ။
၂၀။ ခိုင်နု ငယ်
Happy Bithday !!!! Nay Zaw ရေ......
၂၁။ Zar Zar Win Htut
‎" Happy Birthday "...
၂၂။ Yamone Phoo
H@PPY B!RTHD@Y!! မွေးနေ့မှ
နောင်နှစ်ပေါင်း 100 တိုင် ကျန်းမာပျော်ရွင်သော
ဘ၀ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေနော် . . :)
၂၃။ Thiha Lu Lin
‎" HAPPY BIRTHDAY2U "
May GOD Bless You and May All Your Dreams Come True! :)
၂၄။ Phyo Thu Ya
၂၅။ CHit Thu LAy
၂၆။ Thura Maung
haveagreat time on your BD~
၂၇။ Kyaw Linn
၂၈။ Your friends of friends
Ko Ko Naung
၂၉။ Theamar Phyu
Happy birthday, wishing for u lovely birthday.
၃၀။ Roland Månsson
၃၁။ Yan Naing Phyoe
၃၂။ Frank Zinko
၃၃။ Margaret Rica
၃၄။ Mary Lacambra
hapi hapi b'day,wish u alldbest...gudluck
၃၅။ Daniel Zaw
၃၆။ Wyne Myat Noe
♬ •♩ ·.·´¯`·.·♭•♪ ♡ нαρρу вιятн∂αу to γ☺ü ♡ ♪ •♭·.·´¯`·.·♩ •♬
♬• ♩• ♭• ♪ ♡ нαρρу вιятн∂αу Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ нαρρу вιятн∂αу ♡ ♪ •♭ •♩ •♬
━═✩ May ⓈⓊⒸⒸⒺⓈⓈ follow γ☺ü wherever γ☺ü Ⓖⓞ!!! ✩═━
၃၇။ Thiha Zaw Linn Oo
ဟက်ပီး ဘက်ဒေး ညီလေး
၃၈။ Phoye Mg Mg
၃၉။ Saw Kyawoo
၄၀။ Angel Shaper
Happy Birthday မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေဟေ့
၄၁။ Hnin Lei Lei Phyu
၄၂။ Lay Moe
ဟတ်ပီး ဘတ်ဒေးပါ ညီလေးရေ...
၀ါသနာ ပါတဲ့ အလုပ်တွေကိုလည်း
၄၃။ Atar Angel
၄၄။ Hnin Lei Lei Phyu
Hnin sent youabirthday card!
HAPPY BIRTHDAY မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
နောင် နှစ် ၁၀၀ တိုင်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ။
ံ Happy birthday ပါနော်
သူငယ်ချင်း မွေးနေ့ ကစပီး
Happy Birthday နော်....
happy birthday nyi
၅၀။ kyawzin win83:
ညီရဲ့၂၄ ပြည့်မွှေးနေ့မှ စပြီးနောင်နှစ် ပေါင်းများစွာ
စိတ်ရဲ့ ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်ရဲ့ချမ်းသာခြင်း တွေနဲ့အတူ
လူတွေရဲ့ အကြိုးကို ဒီထက်မက သယ်ပိုထမ်းရွက်နိုင်တဲ့
Happy Birthday Fri !~!
.•*¨*•░H░A░P░P░Y░(¯`'•.¸ *♥♥♥* ¸.•'´¯)
(¯`'•.¸*♥♥♥*¸.•'´¯) Hope you enjoy
¸.•*¨*•.♪♫♫♪Happy Birthday .♪♫•*¨*•.¸¸
♥Happy Birthday to youuuu
ချစ် တဲ့သူနဲ့ လဲအဆင်ပြေပြေ
ကောင်းမလေး ရလိုက်ပြီလား ?
မရသေး ၇င်လဲ မြန်မြန် ၇ပါစေလို့
happybirthday ပါ အကို
၅၅။ ထွန်းထွန်း -မော်လမြိုင် ကိုလေး မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး လိုက်တယ်နော် ကိုလေး မွေးနေ့မှာ ပျော်ပျော်လေး နေနော် ကိုလေး မွေးနေ့မှာ ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ ပျော်မြူးပါစေ။
24 နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ မှသည် နောင်နှစ် ပေါင်းများစွာထိတိုင် အောင်မြင်မှုများရပါစေ။
၅၇။ သူငယ်ချင်း ဖြိုးမင်းရဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင် သီချင်းလေး ဖြစ်ပါတယ်။
၅၈။ ညီလေး ရန်လင်းအောင် ရဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင် သီချင်းလေး ဖြစ်ပါတယ်။<
၅၉။ ဆရာကိုဝဏ္ဏထွန်း မှ မွေးနေ့ဆုတောင်းလေး ဖြစ်ပါတယ်။
၆၀။ သူငယ်ချင်း မောင်စွယ်စုံကျမ်း မှ မွေးနေ့ဆုတောင်းလေး ဖြစ်ပါတယ်။
၆၁။ သူယ်ချင်း လွမ်းပိုင်ရှင်မှ မွေးနေ့ဆုတောင်းလေး ဖြစ်ပါတယ်။
၆၂။ ညီလေး စိုင်းလင်းထက် မှ မွေးနေ့ဆုတောင်းလေး ဖြစ်ပါတယ်။
၆၃။ တီလေး jasmine မှ မွေးနေ့ဆုတောင်း
ညီ happy birthday ပါ။ အကိုမလာနိုင်တာ ခွင့်လွတ်ပါ။
၇ ရက်နေ့မှာ ရောက်ရှိလာမဲ့ မွေးနေ့မင်္ဂလာ ရက်မြတ်လေး အတွက် တောင်းဆုလေးချွေခဲ့တယ် မောင်နေဇော်လင်းရေ .... ထူးမြတ်တဲ့ မွေးနေ့ကစလို့ ကောင်းကျိုးလိုအင်ဆန္ဒတွေ ပြည့်ဝပြီး မွေးနေ့ပေါင်းများစွာကို အေးချမ်းစွာ ဖြတ်ကျော်နိုင်ပါစေ။ မွေးနေ့အတွက် အားကြိုး မာန်တက်ပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ဂျက်ဂျက်လည်း တူညီသော အကျိုးခံစားနိုင်ပါစေ။ စိတ်ဓာတ် အစဉ်ကြည်လင် အေးမြပါစေကွယ်။
Happy Birthday ပါ ကိုနေဇော်လင်း ရေ။ ဒီနေ့ ၇ရက်နေ့ဆိုတော့ ကွက်တိပဲ။ အစ်မ Jas ကမိတ်ဆက်မပေးတော့ တူလေးလား? တူကြီးလား? မသိဘူးဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျာ။ :P
မွှေးနေ့မှာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေတဲ့ ဘ၀ပိုင်းရှင်ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ နှစ်ဟောင်းက အပြစ်တွေ ကင်းစဉ်ပြီး နှစ်သစ်မှာ စိတ်သစ်လူသစ်နဲ့ အောင်မြင်တိုးတက်ပါစေ ....
အကို့ရဲ့ မွေးနေ့လေးမှာ ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့နိုင်ပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော် ... အကို မနက်ဖြန် ညီမလာနိုင်လောက်ဘူး......
မွေးနေ့မှာ ဆန္ဒနဲ့ ဘ၀ တစ်ထပ်တည်းကျပါစေ။
မွေးနေ့ ကြိုဆိုတောင်းပေးလိုက်တယ် ညီငယ်လေး နေဇော်လင်း ၊ ယခင့်ယခင် မွေးနေ့များအပါအ၀င် ယခုမွေးနေ့မှ စပြီး နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ငါ့ညီလေး စိတ်၏ချမ်းသာချင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာချင်း၊ လိုရာ ဆန္ဒအ၀၀ ပြီးပြည့်စုံနိုင်ပါစေ .... ညီငယ်လေး နေဇော်လင်း
ခုနှစ်ရက်မှာ ကျရောက်မဲ့မွေးနေ့ မှာပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ။
မွေးနေ့ မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေလို့ ကိုနေရေ ... အဆင်မသင့်လို့ စင်မြင့်ပေါ်က အဲမှားလို့... ဒီနေရာလေးက ဆုတောင်း ပေးနေလျှက်ပါ။
happy birthday ပါ ကိုနေဇော်လင်းရေ.. မွေးမှသည်နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ တိုင်အောင် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပါတယ် ရှင် ...
စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာစွာနဲ့ ဘလော့အကျိုး ဆက်လက်သယ်ပိုးနိုင်ပါစေ။ ယနေ့မှစကာ နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ပျော်ရွှင်ဖွယ် မွေးနေ့ ပေါင်းများစွာကို သူငယ်ချင်းများနဲ့ အတူပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေရှင် ခင်မင်စွာဖြင့် ...
ဒီနှစ်မှာ ကျရောက်သော မွေးနေ့ မှ စပြီးဘ၀တစ်လျှောက်လုံးပျော်ရွင်မှု အပေါင်း ခညောင်းပါစေ။
ကိုနေဇော်လင်းရေ .... မွေးနေ့မှ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ထာဝရပျော်နိုင်ပါစေဗျာ ...
happy birthday ပါ ချစ်ကိုကြီးရေ ယခုမွေးနေ့မှ သည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ချစ်သူနဲ့ ရွှေလက်မြဲမြဲ တွဲနိုင်ပါစေ....
ယနေ့ ကျရောက်သော မွေးနေ့ မှသည် နောင်နှစ် ပေါင်းများစွာတိုင်း ပျော်ရွှင်သောဘဝလေး ပိုင်ဆိုင်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေး လိုက်ပါတယ်။ ကိုနေဇော်လင်း .... ခင်မင်စွာဖြင့်....
happy birthday ပါ ကိုနေဇော်လင်းရေ.. မွေးမှသည်နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ တိုင်အောင် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပါ တယ် ရှင် ....
၇၉။ မဒမ်ကိုး :
ဟတ်ပီဘတ်ဒေးပါ။ နေဇော်လင်းရေ ခုမှကိုယ်ထက် ငယ်မှန်းသိတယ် ဟဟဟဟ မွေးနေ့မှာသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ ပျော်ရွှင်ခြင်းများ ရောက်ရှိလာပါစေ။
လှပသော နေ့ရက်များကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေနော်
၈၁။ blackroze :
Happy Birthday ပါ နေဇော်လင်းရေ ...
မွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်သောက ကင်းဝေးပြီ လိုအင်းဆန္ဒပြည့်ပါစေ။
၈၃။ June Moe :
Happy Birthday ပါ ကိုနေဇော်လင်းရေ ...
မင်္ဂလာရှိတဲ့မွေးနေ့ပါး) နောက်ကျသွားတယ်။
ကဗျာလေး တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ မွေးနေ့ရှင်လည်း ယနေ့မှစ အသက်ရာကျော်ရှည်ပြီး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာ ဘ၀ခရီးကို လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ ရှင် ...
ငါလည်း မိစံ ပြောသွားသလိုပဲဟေ့ ...
မွေးနေ့ ရှင်တစ်ယောက် ပျော်ရွှင်ဖွယ် မွေးနေ့ရက်မြတ်ဖြစ်ပါစေ.... ဆန္ဒနဲ့ ဘ၀တစ်ထပ်ထဲ ကျပါစေ .... ဂျက်ဂျက်လည်း ထပ်တူ ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ ကဗျာတွေ၊ စာတွေ ရေးနိုင်ပါစေ ။
အော် ... အစ်ကိုရဲ့ ညီလေးနေဇော်လင်းရဲ့ မနက်ရောက်မဲ့၂၄နှစ် မွေးနေ့မှ နောင်နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ တိုင် စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ် ကျန်းမာနဲ့လိုရာ အားလုံးပြည်ဝပါစေ။ ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်နော် ...
happy birthday par brother
Happy Birthday My fri
ဘိုင့် ... သူငယ်ချင်း ပြန်ပြီ ... ပျော်ရွှင်ပါစေ မနက်ဖန်မွေးနေ့ လေးမှာ နော် ...
Happy Birthday naw nyi ... ငါ့ညီလေး၂၄နှစ်မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ရာကျော်ထိအောင် စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာစွာ နဲ့ နှစ်စဉ် နှစ်တိုင်း ပျော်ရွင်ပါစေလို့ အကိုမွေးနေ့ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ် နော်ညီ ........
happy birthy ကိုနေဇော်လင်းရေ ...
Happy Birthday....ko lay ဒီကနေ့မှစပီး နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာ ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့ကို ချစ်တဲ့သူနဲ့ အတူတကွ ဆင်နွှဲနိုင်ပါစေလို့ ညီလေး ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
မွေးနေ့မှ စပြီးပျော်ရွင်ချမ်းမြေ့ပါစေ။ လိုအင်ဆန်နတွေပြည့်ဝပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
မွေးနေ့မှသည် နောက်နှစ်ပေါင်း ၇၀ တိုင်တိုင် ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ လိုရာဘ၀ပန်းတိုင်သို့ လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ ကိုကို ... ညီလေး ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ ....
၁၀၃။ angel shaper
Happy Birthday ... သားသားရေ ... ဘာကျွေးမှာလဲ ဘာကျွေးမှာလဲဟင် ကာရာအိုကေရော ဆိုရမှာလားလို့ ... ဟိဟိ။ ပျော်ရွှင်စရာ မွေးနေ့လေးဖြစ်နိုင်ပါစေနော် ...
မွေးနေ့ပျော်ရွှင်ပါစေကွာ..။ ဒီနှစ်တော့ ငါမလာနိုင်တော့ဘူးး) ပျော်အောင်နေ
မွေးနေ့ရှင် နေဇော်လင်းရေ ယနေ့မှစ အသက်ရာ ကျော်ရှည်ပြီး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာ ဘ၀ခရီးကို လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ ရှင် ...
ကိုကို 24 နှစ်မှ စနှစ်ပေါင်းများစွာ စိတ်ချမ်းဟာပြီ ကိုကိုဖြစ်ချင် ဆန္ဒတွေပြည့် ၀ပါစေ။ လူတွေကိုလဲ ဒီထက်မက ကူညီနိုင်ပါစေ။ သာယာပျော်ရွှင် သောဘ၀ကိုလဲ တည်ဆောက်နိုင်ပါစေ ...... ညီမလေး
၁၀၇။ တီလေး သန္တာဦး
သားသား မွေးနေ့က ဘာကျွေးမှာလည်း တီလေးလည်းလာစားမယ်။ နေကောင်းလား မတွေ့တာကြာပြီနော် သားသား ။ မွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်ပါစေ ။ စိတ်ချမ်းသာ ကိုချမ်းသာနဲ့ ထာဝရနေနိုင်ပါစေ။ ပရဟိတ လုပ်ငန်းများကိုလည်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပါစေနော်။ တီလေးက လိုင်းက သိပ်မတက်ဖြစ်လို့ပါနော်။ ကြိုပြီး ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ်နော် သားသား ...
မနက်ဖြန်ညီမွေးနေ့လေ ပျော်ရွှင်ပါစေနော် ညီလေး
နက်ဖြန် တားတားမွေးနေ.ဆိုတော.happy birthdayနော်
7.12.2011 သူငယ်ချင်း နေဇော်လင်း အတွက် အမှတ်တရ သူငယ်ချင်း နေဇော်လင်း ၏ မွေးနေ့လေးမှ စ၍ မိသားစု ညီအစ်ကို မောင်နှမများ သူငယ်ချင်းများ မိတ်ဆွေများ နှင့် အတူ ပျော်ရွှင်စရာ ကောင်းသော အချိန်များ ၊ နေ့ရက် များကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီး လူအများ အတွက် အသုံးဝင် အကျိုးပြုနိုင်သော လမ်းမှန်ကို ညွန်ပြနိုင်သော လူသား အားလုံးအတွက် အလင်းရောင်ပေးစွမ်းနိုင်သော Blogger (မျှဝေသူ) တစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေ။
မွေးနေ့ အတွက် ကြိုဆိုပါတယ် အကို မွေးနေ့ မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ .. အများ အကျိုးလည်း ဆထက်တစ်ပိုး လုပ်ဆောင်နိုင်ပါစေ။
happy birthday bro 24 year old so so goood.
ပို့သမေတ္တာ ကောင်းမွန်ဆုတောင်း မွန်လှ စိတ်ထားရင်ဝယ် ထားကာ ချစ်ချစ် ခင်ခင် ပျော်ရွှင်စွာ ပျော်ပါးနေတဲ့ မင်းရဲ့ပုံ သဏ္ဍန် လှပနိုင်ပါစေ။ ယနေ့မှ စသော်အများ အလယ်၌ပြိုင်သူစံရှား လင်းလက် အားသည် ကောင်းကင်ထက်က ကြယ်တစ်ပွင့် အမှောင် ကမ္ဘာအားအလင်း ပေးနိုင်စေ။ ဆုမျှော်ရည်မှန်း သူ့အလင်းအား အများသိပါစေ မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ ရှင် ....
happy birthday ညီလေး
ညီလေး မွေးနေ့မှသည် နောက်ထက် နှစ်ပေါင်းများစွာ တိုင်အောင် ပျော်ရွှင်စရာ အိပ်မက်များကို အကောင် အထည်ဖေါ်ဆောင်နိုင်ပြီး အနာဂါတ် သာယာလှပသော ဘ၀ခရီး လမ်းကို အရိုးရှင်းဆုံးသော ချစ်သူနဲ့အတူ လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ။
နောက်ထက် နောက်ထက် နေ့ ရက်ပေါင်းများစွာနဲ့မနက်ဖြန်ပေါင်းများစွာ ကြားမှာအောင်မြင်ခြင်းများ ကို ထာဝရပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ညီလေး မွေးနေ့ မှာ အကို ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ခင်မင်ခြင်း ထာဝရ တည်မြဲခြင်းဖြစ် ညီလေး ရဲ့အက်ို....
မွေးနေ့တော့ မလာနိူင်ဘူးဗျာ နောင် နှစ်ပေါင်းတစ်ရာတိုင် ပျော်ရွှင်နိူင်သော မွေးနေ့ရှင်ဖြစ်ပါစေလိုပဲ့ဆုတောင်းပေး လိုက်တယ်။
၁၁၈။ SanSan Soe
Happy Birthday NayZawLin မွေးနေ့လေးမှာ ထာဝရ ပျော်ရွှင်ပါစေနော်။ ဖြူစင်သော စေတနာနဲ့ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ်။
hi happy birthday ဘာ အကို
အခုလို ဖိတ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွင်ပါစေ ဗျာ။ နောက်ကျမှ ဆုတောင်းပေးတဲ့ အတွက် တောင်းပန်ပါတယ်။
၁၂၁။ angel shaper
သားသားရေ ... ဘာကျွေးမှာလဲ ဘာကျွေးမှာလဲဟင် ကာရာအိုကေရော ဆိုရမှာလားလို့ ... ဟိဟိ။ ပျော်ရွှင်စရာ မွေးနေ့လေးဖြစ်နိုင် ပါစေနော်...
နေကြီးရေ ဘာကျွေးမှာလဲ (လေယာဉ်လက်မှတ် စီစဉ်ပေးမယ်ပေါ့လေ မြန်မာပြည်ကနေ မွေးနေ့ ပွဲတတ်ရောက်ဖို့တွက်) အင်းမွေးနေ့ မှာ ညီကိုတွေစုံညီစွာ စကားဖောင်ဖွဲ့ ချင်ပါတယ်။ တစ်နှစ်တော့ ဆုံကြတာပေါ့ဗျာ။
သားသား မွေးနေ့ကို လာချင်သော်လည်းပဲ ခရီးစရိတ် မတတ်နိုင်လို့ အဟဲ ဆောရီးနော် မွေးနေ့ရက်မြတ်မှသည် နှစ်တရာ တိုင်စေသော် ...
၁၂၄။ Min Min Htaik
အော် ... အခုမှ ၂၄ နှစ်လား ဒါဆို .... ငယ်ပါသေးတယ်။ ညီလေး နေဇော်လင်း မွေးနေ့ မှ စ၍ ရာသက်ပန် ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ပြည့်ဝနိုင်ပါစေ။ မွေးနေ့ လက်ဆောင်တော့ မပေးအားသေးလို့နောက်မှနော် ....
၁၂၅။ ~လင်းနစ်~' .
အကို ညီအတွက်တော့ လေယာဉ်လက်မှတ် ဝယ်ပေးပြီး ပို့ပေးလိုက်ပေါ့နော် ညီ အရောက် လာခဲ့မယ်လေ ဟိဟိ ......
၁၂၆။ တိုးလေး (ရန်ကုန်)
မွှေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ သူငယ်ချင်း
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ မွေးနေ့ ရက်မြတ်လေး ဖြစ်ပါစေရှင်
ညီလေးရေ ..... မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေကွာ။။။။။
မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေနော် နောက်ကျလို့ စိတ်ဆိုးရဘူးနော် အရမ်းခင်တယ် ........ ပျော်ပါစေနော်...........
မင်္ဂလာပါ..... တယ်ရင်းလေးရေ........ တယ်ရင်းလေးရဲ. ယနေ.ကျရောက်လာတဲ. ........ မွေးနေ.မှသည် နှောင်နှစ်ပေါင်း(120)တိုင်အောင်....... သယ်ရင်းချစ်တဲ.မိသားစုနဲ.အတူထာဝရပျှော်ရွှင်စွာနဲ. ....... လှပသော အနာဂတ်တွေနဲ.အတူ....... အောင်မြင်မှု့ အပေါင်းသရဖူဆောင်းရင်း...... ဘ၀ခရီးလမ်းကို အခက်ခဲမရှိဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို. ....... ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်.........။ H@ppyBirthd@y........ပါ..ဂျာ....။ ပျှော်ရွှင်ပါစေဂျာ...။
သယ်ရင်းဖြူ လာလည်ပါတယ်နော် မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေနော် မွေးနေ့ လက်ဆောင်တော့ မပေးတက်လို့နော် နောက်တစ်ခါ လာလည်မှပဲ ပေးတော့မယ်။
သူငယ်ချင်းရေ ... ဘ၀မှာ သောက ကင်းပြီး သုခ အပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံပါစေ။
Happy Birthday ပျော်ရွင်ပါစေ သူငယ်ချင်း မွေးနေ့ လေးလာ သွားတယ်နော်။ နေ့ခင်းမအားလို့ ........ ဟဲ
ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေ... ကြုံတွေ့ရမယ့် နက်ဖြန်ပေါင်းများစွာတွေမှာ ပျော်ရွှင်ခြင်း အောင်မြင်ခြင်း တွေနဲ့ ပြည့်စုံပါစေ။
သူငယ်ချင်းလေး နေဇော်လင်း ရေ............
အခုသူငယ်ချင်းရဲ့ မွေးနေ့ ဆိုတာ
HAPPY BIRTHDAY နဲ့ တောင်းဆုဆိုပေးခဲ့ကြတယ်....။
HAPPY BIRTHDAY ! နဲ့ ကြိုရင်း
သူငယ်ချင်း လေးဘ၀ မှာလည်း
ထာဝရ အမြဲထွန်းလင်း တောက်ပနိုင်ရေး
ကိုယ်ဆုတောင်းပေး ခဲ့ပါတယ်။ ။
ပျော်ရွှင်စရာ မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ အစ်ကိုကြီးရေ
မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေနော် သူငယ်ချင်း
ကဲ ... သားသားလေး ရေ 24 နှစ်လည်းပြည့်သွားပြီ မိန်းမယူလို့ ရပြီနော် ... သားသားလေးရဲ့ သားသား/မီးမီး လေးတွေမွေးဖို့ တာဝန်ရောက်လာပြီ ... မင်္ဂလာရှိသောမွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ ညီလေး သား သား ...
၁၄၀။ yelwihtun ထာဝရ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေနော် ဘ၀နှင့်ဆန္ဒ တစ်ထပ်တည်းကျပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ်နော်
၁၄၁။ မိုးဇက် အော် ကိုနေဇော်လင်း ၊ ကိုနေဇော်လင်းနာမယ်ကြီးနေတာ ခုမှပဲတွေ့တော့တယ် ၊ကဲ သံပြိုင်အော်လိုက်ရအောင်ဟတ်ပီဘက်ဒေးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးကိုနေဇော်လင်း၁၄၂။ လှိုင်ဘွား ဘာ အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ လာစားသွားတယ်တားတားရေ၁၄၃။ ကိုထက်
မဂ်လာရှိသောမွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေ.... ယနေ့မှ နောင်နှစ် ပေါင်းများစွာ ပျော်ရွင်နိုင်ပါစေ။
၁၄၄။ အောင်ကျော် မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွင်ပါစေ ညီ ... ခင်မင်စွာဖြင့့် HAPPY BIRTHDAY TO YOU ....၁၄၅။ ငွေလမင်းပျော်ရွင်သော မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ။၁၄၆။ လှိုင်ဘွား နောက်တစ်ခါလာထပ် စားသွားတယ် ညကျရင် မွေးနေ့ ပါတီလုပ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလား ယမကာလေး ဘာလေးနဲ့အဟဲ ....
၁၄၇။ မောင်(စွယ်စုံကျမ်း)မ ဘိုင်ပြတ်နေလို့ရေနဲ့ ရောသောက်နေတာ မွေးနေ့ လာစားချင်လိုက်တာ၁၄၈။ ရစ်
2011.December.07 နေ့တွင်ကျရောက်သော မွေးနေ့ရက်မှသည် နောင်နှစ် ပေါင်းများစွာထိ တိုင်ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ပါစေ...
၁၄၉။ သေ်ာတာ မွေးနေ.မှာပျော်ရွင်ပါစေ ဒီထက်မက နည်းပညာတွေဖြန့် ဖြူးနိုင်ပါစေ။ ကိုနေဇော်လင်း
၁၅၀။ jawni happy birthday....၁၅၁။ khin khin sein
အမက စင်ကာပူက မောင်လေးရဲ. ဘလော.ဂ်ပရိတ်သတ်တစ်ဦးပါ။ ယနေ.ကျရောက်သော မောင်လေးရဲ့ (၂၄)နှစ်မြောက်မွေးနေ.မှ သည် နှစ်တစ်ရာတိုင် စိတ်ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်ကျန်း မာခြင်းများနှင်.ပြည်.စုံပါစေလို့ ဆုတောင်း ပေးပါတယ်ကွယ်။
ု၁၅၂။ ko lashiohappy birthday to you...၁၅၃။ ၀င်းနိူင်း သူငယ်ချင်းနေဇ်ာလင်း မွေးနေကမှ ပျော်ရွှင်ပါစေ........ နောက်လာမယ်နှစ် ၁၀၀ ထိ တိုင်အောင် ပျော်ရွှင်ပါစေ.....
၁၅၄။ စိုင်းနေ၀င်းသိန်း ညီလေး နေဇော်လင်း 24 နှစ်ပြည့်မွေးနေမှသည် နောင်နှစ်ပေါင်း 120 တိုင် အောင်ကျန်းမာပျော်ရွင်ပါစေလို့ အကို ဆု တောင်း ပေးပါတယ်နော်.......။
၁၅၅။ phyu sin thant HAPPY BIRTHDAY TO YOU၁၅၆။ thinthinhappy birthday to you ....၁၅၇။ ဆုလင်းလတ် ကိုနေဇော်လင်း 24နှစ် မှနောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ထာဝရ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေနော် ........
၁၅၈။ စက္ကဝါ ညီလေး နေဇော်လင်းရေ မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ် ! ကောင်မလေး ချောချောလေး ! နဲ့ အမြန်ဆုံး ဆုံဆည်းနိုင်ပါစေ ကြောင်း ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဂျာ ...
၁၅၉။ ကျော်ဇင်ပျော်ရွှင်သော မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေ။။အသက်ရာကျော် ရှည်နိုင်ပါစေ.......။။၁၆၀။ nyimalayhappy birthday!!!!!happy birthday!!!!!happy birthday!!!!!
ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့ လေးဖြစ်ပါစေ ...... ကိုကိုလိုချင်တဲ့ ဘ၀ကိုရပြီး ဒီထက်မက အကူအညီတွေ ပေးနိုင်ပါစေ .....
၁၆၁။ ko happy birthday browinnaing မွေးနေ့မှပျော်ရွှင်ပါစေ၁၆၂။ လေလွင့်လူဆရာမောင်နဲ့ အတူတူ ကပ်ပြီးလာစားသွားတယ်။ ကိုနေဇော်လင်းရေ .... :P၁၆၃။ မောင်(စွယ်စုံကျမ်း)၀င်ရောက် စားသောက်သွားပါတယ်ဗျာ၁၆၄။့့hlaingmin မွေးနေချိန်မှစ၍ စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်ပါပြီး လိုအင်ဆန္နအားလုံးပြည်ဆုံပါစေ။ ထာဝရပျော်ရွှင်ပါစေ။ ညီလေး လန်းတယ်
၁၆၅။ ဂျွန်ဖြိုး မွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်ပါစေနော် အစ်ကို၁၆၇။ နီလာမွေးနေ့လေးမှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ မောင်လေးရေ ...၁၆၈။ ဖြူလေးနေဇော်လင်း နင့်မွေးနေ့ကပြီး အဆင်ပြေပါစေ အောင်မြင်ပါစေနော် ...၁၆၉။ စိုးစိုးမောင်လေး က ခင်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ မောင်လေးမွေးနေ့ကစပြီး အဆင်ပြေပါစေ၁၇၀။ ဇင်မာသူရင်း နင်ပျော်ပါစေဟာ ... ငါဆုတောင်းပေးပါတယ်။၁၇၁။ ဇင်ကိုကိုကိုလေး နေကောင်းပါစေ မွေးနေ့လေးမှာ အဆင်ပြေပျော်၇ွှင်ပါစေဗျာ ...၁၇၂။ ထွန်းစိုးညီလေး မွေးနေ့အတွက် အမှတ်တရ ဆုတောင်းပေးတယ်ကွာ ... ညီလေး ဒီထက်မက အောင်မြင်ပါစေ...၁၇၃။ ကဗျာသူရင်းလေး .. မွေးနေ့မှ စတင်၍ အားလုံး အဆင်ပြေပါစေလို့ .........174။ ရဲသီဟကျော်(ပီနန်)
ဒီနေ့ဟာ ကိုလေးရဲ့ ၂၄ နှစ်မြောက် မွေးနေ့လေးနော် ညီလေး ကိုလေးကို မွေးနေ့ဆုတောင်းလေး ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုလေး ယနေ့မှစ၍ နောင် နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ တိုင်အောင် ပျော်ရွှင်သော ဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်ပြီး ကိုလေး ချစ်တဲ့သူနဲ့အတူ လျှောက်လမ်းနိုင်ပါစေ လို့ ညီလေး ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ညီလေးရဲသီဟကျော်၁၇၅။ ကိုသန်းကျော်မြင့် မှ မွေးနေ့ဆုတောင်းလေး ဖြစ်ပါတယ်။၁၇၆။ mgyujin: happy birthday ပါ အကို
အကို အသက်ရာ ကျော်ရှည်ပါစေ ...
၁၇၇။ ကိုညီစေမင်း-ကလန်း: ညီလေး၇ဲ.မွေးနေ.မှ နောင်နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ထိ
လိုအင်ဆန္ဒ တလုံးတဝကြီး ပြည့်ပါစေဗျား
အကိုမလာနိုင်တာ ခွင့်လွတ်ပါ .....
၁၇၈။ ဖြိူးဝေ: Happy Birthday ပါ။
ညီမလာနှိုင်တာ ခွင့်လွတ်နော် ..
အားလုံးကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်ရဲ့ မွေးနေ့အတွက် အမှတ်တရ ဆုတောင်းပေးကြသော ည ၁၂ နာရီထိုးတာနဲ့ ဖုန်းထဲသို့ SMS ပို့ပေးသော နန်းထိုက်မှ အစ်ကိုနှင့်အစ်မ SMS ပို့ပေးသော စည်သူ နှင့် သူငယ်ချင်း ဂျို့ဟိုးမှ တက်ထွန်းအောင် မွေးနေ့အတွက် မအားတဲ့ကြားမှ ပိုစ့်ဝင်တင်ပေးသော ဆရာကိုဝဏ္ဏထွန်း မွေးနေ့အတွက် မလာနိုင်ပေမဲ့ ဝက်ဆိုက်မှာ ပိုစ့်တင်ပေးသော တီလေး jasmine ကိုနေမွေးနေ့အတွက် အလန်းလေးတွေ အထူးလုပ်ပေးထားတယ် ပြောတဲ့ ဖလမ်းဖလမ်းထနေတဲ့ အမောင်(မောင်စွယ်စုံကျမ်း) ကိုလေးမွေးနေ့ အတွက် အမှတ်တရ စာရေးမယ် ပြောတဲ့ ညီငယ် စိုင်းလင်းထက် အမှတ်တရ ကဗျာရေးပြီး ပိုစ့်တင်ပေးသော ယောက်ဖလေး လွမ်းပိုင်ရှင် ကျွန်တော်အတွက် မွေးနေ့ ဆုတောင်းလေး တင်ပေးမယ် ပြောတဲ့ ကိုသန်းကျော်မြင့် မွေးနေ့ ဖလက်သီချင်းများ အတွက် သူငယ်ချင်း ဖြိူးမင်း(ပူချွန်း) နှင့် လာရှိုးမှ ညီငယ် ရန်လင်းအောင် နှင့် ဖွေ့ဘုတ်မှ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးကြသော သူငယ်ချင်းများ ...........
အီးမေးမှ မွေးနေ့ ဆုတောင်းပေးပို့ ကြသော သူငယ်ချင်းများ မွေးနေ့အတွက် အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံပို့ပေးကြသော သူငယ်ချင်းများ နှင့် ညီမလေး နှင်းလဲ့လဲဖြူ ဖုန်းဆက်လာပြီး မွေးနေ့ဆုတောင်းကြသော သူငယ်ချင်းများ မိတ်ဆွေများ ကျွန်တော်မွေးနေ့အတွက် အမှတ်တရ မွေးနေ့ဆုတောင်းများ ပြုလုပ်ပေးသော အနာဂတ်ကောင်းကင်မှ တာဝန်ရှိ အက်မင် နှင့် သူငယ်ချင်းများ အားလုံး ဖူးစာရှင်လေးမှ သူငယ်ချင်းများ အားလုံး စီဘောက်တွင် လာရောက်ဆုတောင်းပေးကြသော သူငယ်ချင်းများ မိတ်ဆွေများ ဝက်ဆိုက်တွင် မွေနေ့အတွက် ဆုတောင်းပေးကြသော သူငယ်ချင်းများ မိတ်တွေများ အားလုံး ....
မွေးနေ့ပွဲအတွက် ကြွရောက်လာကြသော IT GARDEN မှ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေများ နှင့် အဝေးကနေ မွေးနေ့ပွဲအတွက် ကေအယ်လာဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ အစ်မ ခင်ပြည့်စုံ နှင့် သူငယ်ချင်း အလုပ်ကနေ ခဏလာတွေ့တယ်ဆိုတဲ့ ညီငယ် ငြိမ်းချမ်းကို ပြောမနာ ဆိုမနာ ခင်မင်ရတဲ့ ယောက်ဖလေး ဝင်းနိုင် အလုပ်တွေဖိနေလို့ မလာရောက်နိုင်တဲ့ ဘာလော့ကာ သူငယ်ချင်းများ နှင့် ကျွန်တော့်ကို အစစအရာရာ ကူညီပေးတဲ့ ဆရာကိုညီညီ မွေးနေ့အတွက် အဆင်ပြေအောင် လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ ဝမ်းကွဲအကို ကိုငယ် နှင့် ကျွန်တော်ရဲ့ သူငယ်ချင်းများ မိတ်ဆွေများ အားလုံးကို ဒီနေရာကနေ အထူးထူး ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားပါရစေ ခင်ဂျာ ....
အားလုံးကို လေးစား ခင်မင်လျှက်
ကိုလေးရေ ညီရောက်လာပါတယ်နော် ကိုလေးမွေးနေ့လေးမှာ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ရင်ထဲကစကားလေးတွေကို ကိုလေးနဲ့ ထပ်တူခံစားရင်း ပိတိဖြစ်မိပါတယ် ..နောက်လာမဲ့ မွေးနေ့တိုင်းမှာလဲ အခုလိုပျော်ရွင်နိုင်ပါစေဗျာ....
12/08/2011 9:24 PM
12/08/2011 9:45 PM
12/08/2011 9:47 PM
သူငယ်ချင်းလေးရေ မွေးနေ့မှစတိုင် နောင် နောင်နှစ်များမှာ ထာဝရတစ်သက်တာပျော်ရွှင်ပါစေကွာ
12/09/2011 1:44 AM
ညီ ကိုလေးကို ဆုတောင်းပေးပြီးသွားပြီနော် ဒါပေမဲ့ အားမရဘူးဗျာ အဲဒါကြောင့် ထက်ပြီး တော့ ဆုတောင်းပေးပါတယ် ။ကိုလေး မွေးနေ့မှာ ကိုလေး ပျော်နေသလိုညီလဲ ပျော်ပါတယ် ကိုလေး ကိတ်မုန့်စားနေသလို ညီလဲ ထမင်းကြမ်းခဲ ကိုက်နေပါတယ်။ကိုလေးရယ် ကိုလေးရဲ့မွေးနေ့မှာ ဆုတောင်းပေးကြတဲ့ ကိုကို မမ ညီ ညီမလေးတွေကိုလဲ ကိုလေးရဲ့ဒုတိယံပိအနေနဲ့ ညီ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ကိုလေး ယနေ့မှ စ၍ ထာဝရပျော်ရွှင်ပါစေ စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်ပါ၍ လိုအင်ဆန္ဒတွေ ပြည့်ဝပါစေ။အနာဂတ်ရဲ့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေ အတွက် ပညာ၊ ဗဟုသုတ၊ အတွေးအခေါ် အရာအားလုံးကို သင်ပြပေးနိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်ထူးပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ဖြစ်သောကြောင့် အင်တာနက်ဆိုတဲ့ အွန်လိုင်းကြီးပေါ်မှာ ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ဆိုတဲ့ အသ်ိနဲ့ စာပေများစွာရေးသားပြီး ညီတို့လို့ အသိမကြွယ်သေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများစွာ ကို စာပေဒါနမြှောက်အောင် ဆုံးမ ပေးနိုင်ရေးအတွက် ထာဝရရှင်နိုင်ပါစေလို့ ညီ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ကိုလေးရဲ့ညီရဲသီဟကျော်